ज्ञान भएका तर विवेकविहीन नेता र विज्ञहरूको मारमा हामी पिल्सिएका छौं : कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी – Khabar28media
ज्ञान भएका तर विवेकविहीन नेता र विज्ञहरूको मारमा हामी पिल्सिएका छौं : कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता चन्द्र भण्डारीले नेपाली जनता ज्ञान भएका तर विवेकविहीन नेता र विज्ञहरूको मारमा पिल्सिनुपरेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी लेख्दै नेता भण्डारीले भनेका छन्, ‘नेपालका ती नेता र विज्ञ जसले देश निर्माणको जिम्मा लिए र आफूलाई सर्वज्ञ ठाने,
तिनीहरूले लिएको सोच, बनाएका योजना र गरेका कामको प्रतिफल देख्दा लाग्दछ, तिनीहरू दिमागी रूपमा रोगी थिए, अशक्त थिए !
आज हामी यही ज्ञान भएका तर विवेकविहीन नेता र विज्ञहरूको मारमा पिल्सिएका छौं । कहिले गर्ने ? कसले गर्ने ? यी हुन् उत्तरविहीन प्रश्नहरू !’
नेता भण्डारीले लेखेका छन्, ‘हाम्रो देशमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ! अनि मेरो देशको तस्वीर ! २०६५ सालमा मेरो पीएचडीको अनुसन्धानको लागि झापा गएको थिएँ ।
झापाको चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरसँग धेरै समस्याहरूको बारेमा प्रश्न राखेको थिएँ । त्यसमध्ये एउटा प्रश्न थियो, ‘नयाँ नेपालमा तपाईंहरूलाई के गर्नुपर्दछ ?’ सबैको एकस्वरको भनाई थियो, ‘हाम्रा बच्चा पढाइ देऊ र एउटा भिटा देऊ ।’ उनीहरूले बच्चाहरूबाट भविष्य खोजे, बस्ने छाप्रोको लागि घडेरी ।
त्यसरी नै वीरगञ्ज ठाकुरराम क्याम्पसका छात्राहरूसँगको छलफलको क्रममा माथिकै प्रश्न गरेको थिएँ । उनीहरूको जवाफ थियो, ‘दहेज प्रथाबाट मुक्त गरिदेऊ !’ अहिले पनि खाना, नाना, छाना, शिक्षा र स्वाथ्यदेखि तिनै सामाजिक समस्याहरू ज्युँकात्यूँ छन् । एउटा योजना सम्पन्न गर्न दशक लाग्दछ कि बीचैमा छोडिदिन्छ ।
नाकाबन्दी र भूकम्पबाट सिक्ने कोसिस गरिएन ? अहिले नयाँ समस्या थपिएको छ ‘कोरोना’ । समय बित्दै जान्छन्, कार्यक्रम बनिरहन्छ, जनताको अवस्था झन् खराब । नेपालका ती नेता र विज्ञ जसले देश निर्माणको जिम्मा लिए र आफूलाई सर्वज्ञ ठाने, तिनीहरूले लिएको सोच, बनाएका योजना र गरेका कामको प्रतिफल देख्दा लाग्दछ, तिनीहरू दिमागी रूपमा रोगी थिए, अशक्त थिए !
Previous Article गुल्मी का दुबै मृगौला पीडितले पायो सहयोग मगर संसार कोषले गरे यति धेरै सहयोग
Next Article सरकारलाई प्रियंकाको आग्रह–‘पहिले चुनावमा भोट पाउन लायक काम गर्नुहोस्